amidio ny raharaham-barotra Archives - BusinessFinder.Me
amidio ny orinasako
Amidy amina orinasa fanasan-damba any Dubai
Orinasa fanasan-damba amidy any Mirdif miaraka amin'ny masinina 1) Masinina Madio maina 2) Masinina fanasan-damba 3) fanamainana 4) Vy etona 5) Masinina fonosana ihany no mividy ...
Orinasa garage miasa tsara amidy any Dubai
Atrikasa Automotive vao misokatra izay hita ao Al Quoz 1, Dubai. Miaraka amin'ny fitaovana sy fitaovana avo lenta izay marika alemanina. Ary mampiasa ...
Fivarotana hosodoko azo amidy tsara any Dubai
Al Qusais Industrial 2, Al Qusais Industrail Area, Al Qusais, Dubai, UAE
Jotun Industrial Industrial Paint Mixing Machine ary Jotun Mixing Machine misy sary hosodoko jotun sy haingon-trano jotun. Azo ifampiraharahana ny vidiny. Mpanjifa matotra ihany.
Orinasa Styling fiara amidy any Dubai
50% ny orinasa amidy amin'ny maha mpiara-miasa dia mifindra toerana. Orinasa feno amidy koa raha ilaina amin'ny vidiny fanampiny. Mihazakazaka am-pahombiazana ny orinasa ...
Orinasa fanaingoana anatiny no amidy any Dubai
Fitaovana anatiny sy FF & E haben'ny trano fitehirizana-10,000 sqft. Toeram-pidiovana miaraka amin'ny masinina sy booth vita amin'ny pressurized - 8000 sqft miaraka amin'ny trano fidiovana ...
Fivarotana barbera amidy any Dubai
Fivarotana vao misokatra ao amin'ny JVC, toerana lehibe amin'ny arabe lehibe eo akaikin'ny tranombarotra boribory vao natomboka. Ny hofan-trano dia voaloa hatramin'ny 31 aogositra 2021. Tompona tokana, 1 ...
60,000.00AED (Azo ifampiraharahana)
RESTURANT HASAINA AMIN'NY UAE
Resturant tsara mihazakazaka amidy any Karama. Toerana voalohany. Fanofana ambany. Toerana fijanonana ampy. Voasoratra anarana amin'ny sehatra an-tserasera rehetra Zomato Talabat Delivero ...
Salon vehivavy vaovao amidy any Dubai
Famaritana: Vehivavy Salon amidy - Toerana lehibe ao AlBarsha 1, Dubai manoloana ny gara Mashreq Metro. Ao anatin'ny trano fandraisam-bahiny 4 manomboka tsara no misy ...
Fahazoan-dàlana momba ny fitantanana DED miaraka amin'ny kaonty banky amidy any Dubai
Fahazoan-dàlana momba ny fitantanana madio izay navoaka avy amin'ny kaonty Banky 8 taona tsy misy fampindramambola na trosa ahazoana tranokala sy marketing maimaimpoana 1 taona
Trano fisakafoanana sy fisakafoanana amidy any Dubai
Kafo fisakafoanana sy trano fisakafoanana amidy eo akaikin'ny Al Manar Center Naif Deira Dubai. Fitaovana feno sy fitaovana miaraka amin'ny mpiasa
Fandoroana menaka manitra malaza sy parfitra amidy any DubaI
Orinasa mpivarotra enta-manitra sy ranomanitra - Abu Dhabi - Emira Arabo Mitambatra. Varotra antsinjarany. Tena malaza amin'ny varotra voarakitra isam-bolana. Fahazoan-dàlana nanomboka tamin'ny 20 ...
Spain Cluster, International City, Dubai, UAE
Trano fisakafoanana amidy. Trano fisakafoanana sakafo indianina misy alàlana miaraka amin'ireo mpiasa matihanina. Fitaovana feno sy miasa. Orinasa efa niorina efa ela, Operatin ...
Al Safa 2, Al Safa, Dubai, UAE
Trano fisakafoanana mahasoa amidy any Dubai
Napetraka feno miaraka amin'ny alalana rehetra, tsy misy fahazoan-dàlana ara-barotra sy trosa rehetra. Trano fisakafoanana mihazakazaka sy be olona indrindra ao Oud Metha amidy amin'ny ...
Orinasa atrikasa fivarotana amidy any Dubai
mivarotra ny anjarako aho noho ny toe-javatra tsy ampoizina. ny orinasa dia miloko fiara azo esorina. Izaho dia mpiara-miasa amin'ny fampahalalana rehetra momba ny fomba fampandehanana ny b ...
Orinasa mandanjalanja fiara amidy any Dubai
Ras Al Khor Industrial 3, Industrial Al Al Rasor, Ras Al Khor, Dubai, UAE
Ivontoerana manadio fiara sy kojakoja ahazoana fiara izay hita ao Ras Al Khor Dubai. Voahodidin'ny mpivarotra fiara efa niasa ary manofa mpandraharaha fiara. Afaka manomboka oper ...
Luxury Ladies Beauty Salon amidy any UAE
Klinika fitsaboana amidy any Dubai
Ao amin'ny jumeira haingo tena kanto, fahazoan-dàlana amin'ny toeram-pitsaboana poly Size: 2300 sq ft // Rent: 150 k 4 dokotera: Derma, GP, plastika. Dental. Sakafo ara-tsakafo. Mpitsabo mpanampy 2, ...
Supermarket amidy. Mpiasa 12. Manofa ambany. Amidy isan'andro 17k. Ny supermarket dia voatanisa amin'ireo sehatra an-tserasera lehibe rehetra. Ny vola manarona bisikileta rehetra, ca ...
Trano fisakafoana kafe sy lakozia amidy any Dubai
Fivarotana kafe manokana eo alohany, lakozia feno lakozia ao aoriana. Tsy nampiasaina ny lakozia ka ny zava-drehetra dia misy fepetra vaovao. Ho tafiditra ao koa ny pop up ...
Studio Studio Dance and Music amidy any Abu Dhabi
Any afovoan-tanàna, amidy trano mozika sy dihy malaza. Ity dia studio feno fitaovana feno toerana malalaka hanaovana hetsika, dihy ...
Luxury Ladies Salon amidy any Dubai
Nadd Al Shiba 1, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Salon vehivavy tsara tarehy any Meydan Nad Al Sheba amidy; Dubai; Fivarotana ny vidiny 650,000 AED; Salon izay misy ao anaty magazay ao amin'ny faritra eo an-toerana; Lafaoro tena lafo ...
Salon azo amidy Gents amidy any Dubai
Gents Salon mandeha 15 taona lasa izay tamin'ny fomba mahomby sy mahasoa. Ity salon ity dia any Deira akaikin'ny Fish manodidina. Faritra be olona be dia be ...